Xog: Ogoow Masuuliyiinta iyo Hay’adaha laga saarayo Madaxtooyo+Magacyadda Masuuliyiintaas – Hornafrik Media Network
Xog: Ogoow Masuuliyiinta iyo Hay’adaha laga saarayo Madaxtooyo+Magacyadda Masuuliyiintaas
By HornAfrik	 Last updated Aug 10, 2017
Agaasimaha Madaxtooyadda Somalia, Fahad Yaasiin ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku amray in Xafiisyadda Dawladda ee dhax dagan Madaxtooyo iyo Siyaasiyiinta halkaasi daganaa inay uga guuraan Muddo 14 Cisho ah, taasoo ku eg 19 ka Bishan, maadaama Warqadda uu saxiixay 5 August.
Haddaba waa Kuwee Masuuliyiinta laga saarayo Madaxtooyo,?
Xuseen Damuumaaye: Sarkaal Sirdoon oo Ethiopia ku xiran.
Xafiisyadda la amray inay guuraan.
Xafiiska Hanti dhowrka Qaranka.
Gudiga Xuduudaha ee Baarlamaanka.
Gudiga Doorashooyinka Qaran.
Xabsiga Ciidanka Madaxtooyo.
Masuuliyiintan laga saarayo Madaxtooyo oo Dhamaantood Dalka ka soo qabtay Xilal sare ayaan loo diyaarin goob ay dagaan, iyo Ciidan Amnigooda ku illaaliya Banaanka Madaxtooyo. Waxaana la siiyay Waqti aan ku filnayn inay ku baneeyaan Guryo ay daganaayeen oo ay ku helaan Goobo kale oo Amni ah, Mana jirto wax lagu qabanayo Guryahan iyo Xafiisyadan laga saarayo Masuuliyiinta, marka laga reebo in la dajaniyo Shaqsiyaad kale oo uu wato Agaasimaha Madaxtooyo.
Xog ay heshay Hornafrik ayeey ku ogaatay in ka saaridda Masuuliyiintan ay sidoo kale ku lug leeyihiin Sirdoonka Qadar oo ka cabsi qaba in Dhaq dhaqaaqooda iyo Saamaynta ay Madaxtooyo ku leeyihiin laga ogaado meelo kale.
Hadda: Qarax ka dhacay Muqdisho.